ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်လာအောင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက ဖိအားပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်လာအောင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက ဖိအားပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
၂၀၁၅ ဆိုတဲ. နိုင်ငံ ရေး Target ကြီးအတွက် ဒေါ်စုဟာ
(ရခိုင် ၊ ကချင်၊ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ) စတာ တွေကို
စစ်အစိုးရ ကိုမျက်နှာလုပ် ပေးဆပ်ခဲ.ရပြီးပါပြီ ၊
ရှေ့ ကို ဘာတွေ စွန်.လွှတ်ပေးဆပ်ရအုံးမလဲ ၊
၂၀၁၅ ဆိုတာကြီး ကရော မှန်းထားသလို ချပေးမှာလား ။
ဒေါ်စုအနေနဲ. ဒီအချိန်မှာ တခုခုကို ကြိုတင်တွက်ဆသင့်ပြီ။
DASSK က ပြည်သူတွေအတွက် (ကိုယ်ကျိုးမပါ)
အမှန်တရား တွေ အနစ်နာခံ လုပ်ခဲ.တာပါ ။
Democracy ပေး မပေး ကတော. အာဏာရှင်တွေရဲ.
ကဏ္ဍ ဘဲ လေ ။
သူတို.ရဲ.အဆင်.အတန်း ၊ သူတို.ရဲ. ကမ္ဗည်း ထိုး
ရတော. မယ်. အချိန် ဘဲလေ ။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
ငုတ်တုတ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်စောင့် နေရုံပဲ..။